‘बाढी पहिरो आयो भने सरकारले बचाउँदैन, आफैले ज्यान जोगाउनुपर्छ’ | newdnn.com
‘बाढी पहिरो आयो भने सरकारले बचाउँदैन, आफैले ज्यान जोगाउनुपर्छ’
२८,बुधबार ०४:२३ Sangita Rai
बर्षायाम शुरु भएपछि देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पुर्वतयारी त गरेको छ । तर त्यो सिमित र बाढी आइहाल्यो भने पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले आफैले आफ्नो नजिकको बाढी पहिरोको जोखिमलाई ख्याल गरेर जोगिनु राम्रो हुन्छ । कोशी, राप्ती र कर्णालीमा आउने बाढीले बर्षेनी दर्जन बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । यस्तो बेलामा स्वंयम आफै कसरी जोगिने त ? हामीले बाढी तथा जलप्रकोपसम्बन्धि विज्ञ विनोद पराजुलीसंग सुझाव मागेका छौँ :
 बाढी पहिरो आउन शुरु भयो ? कस्तो छ सरकार र तपाईहरुको तयारी ?
यसमा हामीले मुख्य काम गर्ने भनेको पूर्वसुचना प्रणाली अनुसार हो । त्यो तयारी भएको छ । सबै बाढी आउने नदीमा हामीले यो प्रणाली जडान गरेर नियमित सुचना लिन शुरु गरेका छौँ । यसमा अरु पनि पर्याप्त रुपमा तयारी छन । यसअघि बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न जनचेतना फैलाउने, सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गर्ने लगायतका काम गरिररहेका छौँ ।
 बाढी आउँदा मुश्किलले नागरिकको ज्यान जोगिने गरेको छ । सरकारसंग बजेट नभएको हो की इच्छाशक्ति ?
अहिले पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको विकास बजेट हो । विपद व्यवस्थापन र यसको पुर्वतयारीमा सरकारको ध्यान अझै जान सकेको छैन । यसले गर्दा पनि बाढी पहिरो आउदा थुप्रैको ज्यान जान्छ । तर सरकार तत्काल गम्भिर भएजस्तो देखिएपनि पछि यसलाई बेवास्ता गरिहाल्छ । न्युनतम बाहेक यस क्षेत्रको पर्याप्त व्यवस्थाका लागि सरकारले धेरै बजेट त छुट्याउन सकेको छैन नै । इच्छाशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।
 सरकारले भर परेर ज्यान जोगाउन मुश्किल छ । यस्तो बेलामा स्वंयम पीडित र जोखिममा परेका मानिसहरुले कसरी आफुलाई सुरक्षित गर्ने त ?
पहिलो कुरा बाढी आउने आसपासका मानिसहरुले सम्भावित जोखिमका बारे आफै जानकार हुनुपर्छ । र उनीहरु हुने गरेका छन । त्यसकारण बाढी पहिरो आउने जस्तो भए त्यसका लागि पहिले नै लत्ताकपडा र खानेकुरालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्छ । अनि बाढी आएपनि त्यो भन्दा अगाडी सोचेर उचाईको ठाउँमा जानुपर्छ । ता की बाढी आएपनि त्यहाँसम्म पुग्न नसकोस । यसका साथै पानी ठुलो परेको दिन रातीपनि जाग्राम बस्न सक्नुपर्छ ।